Keli ahaanshaha waa dilaa ka daran sigaar cabista, khamriga iyo cayilka, wuxuu sababaa… – Hagaag.com
Posted on 14 Janaayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dareenka keli ahaanshahu ma ahan kaliya dareen raaxo-darro leh, balse wuxuu kugu yeelan karaa saameyn caafimaad daro oo khatar ah, qofka keligiisa nool ayaa waxaa ku badan cudurada dhiig karka iyo Kansarka. Sidaa darteed kelinimada ayaa ka khatar badan sigaar cabista, khamrada iyo cayilka.
In kasta oo qofka casriga ahi macaamilkiisa adduunku ay fududahay iyadoo ugu wacan dhaqdhaqaaqa, helitaanka teknolojiyada iyo adduunka dijitaalka, sidaa darteed kelinimadu waxay noqotay cudur baahsan, laakin waxaa jira baaritaan naxdin leh oo sheegeysa inuu yahay (dilaaga numbarka koowaad) ee bulshada casriga ah.
Saynisyahanada ayaa ka digayay 15 sano ka hor khatarta kelinimada ee ku aaddan caafimaadka qofka, Baarayaasha ayaa tan iyo markaasi ay diyaariyeen 148 daraasad oo laga keenay adduunka oo dhan oo laxiriira arrintan, natiijooyinkuna waxay ahaayeen kuwo laga naxo!.
Marka loo eego daraasadahaan, kali ahaanta iyo ka go’doonka bulshada ay yihiin kuwa ugu saameynta weyn oo ku leh nolosha qofka, saameyntooduna waxay ka badataa cudurada ay keenaan cayilka iyo khamriga, waxaana sannado badan soo badanayey oo la dareemayay in laga karantiilo dadka qaarkii bulshada.
Sida saynisyahannadu aaminsan yihiin – waxay la xiriirtaa taariikhdii hore ee aadanaha, markii wada noolaanshuhu aasaas u ahaa jiritaanka. Nolosha kooxdu way fududahay waxaana la wadaagaya shaqada wadajirka ah si loo sugo cuntada iyo taranka, isla markaana laga wada ilaaliyo xoolaha khataraha ay ka mid yihiin xaywaanka dad cunka.
Haddii laga tago kooxnimada, waxay la micno tahay inaad wajahdo khatarta nolosha kaligaada, taas oo keenta xiisad nafsi ah oo jirka u horseedaya inuu ku siiyo digniino badan oo caafimaad, sababtoo ah luminta amniga ka jira gudaha kooxda.
Saynisyahannadu waxay sameeyeen tijaabo laba qof ah si ay u cabbiraan heerka walaaca ay qabaan, iyaga oo baaraya candhuufta si ay u arkaan boqolkiiba hoormoonnada walaaca ee midkastoo ka mid ah, natiijadana waxay noqotay in kuwa ku raaxeysta xiriirka bulshada ay leeyihiin koror dhexdhexaad ah hormoonka “cortisol”, sidaa darteed ka tirsanaanta kooxdu waxay siisay badbaado, sida ay cilmi-baarayaasha rumeysan yihiin.
Cudurrada halista ah
Marka laga hadlayo qofka kelinimada, heerarkiisa hormoonka cortisol aad ayuu u sarreeyay, daraasado kalena waxay muujiyeen in uu sarreeyo maalintii oo dhan, taas oo keentay in hurdadu hoos u dhacdo, sonkorta iyo cadaadiska dhiiga oo kordha, sidoo kale waxaa hoos u dhacda nidaamka difaaca sababo la xirira cortisol-ka.
Xirfadlayaasha caafimaadku waxay ka digayaan in kelinimada iyo ka go’a dadka ay sababaan cuduro halis ah sida kansarka, wadne xanuun, xididada dhiiga oo wax gaara, sidaa darteedna ma ahan oo keliya mushkilad nafsi ah ee waa ka weyn tahay.